Coordinates: 41°40′37″N 26°33′20″E﻿ / ﻿41.67694°N 26.55556°E﻿ / 41.67694; 26.55556
- Duqa magaalda
- Magaalda Edirne
6,098 km² (2,354.5 sq mi)
42 m (137.8 ft)
196.7/km² (509.5/sq mi)
Edirne (Af Faarsi : ادیرن, Reer aw xasan waa beel kamid ah‎, Af Turki : Edirne, Template:Lang-el, Af Bulgaari : Одрин), waa magaalo ku taal qabta yurub ee Turkiga. Edirne [ediɾne], taariikh ahaan loo yaqaano Adrianople (Hadriyanopolis ee Laatiinka ama Adrianoupolis ee Giriigga, oo ay aasaaseen Boqortooyada Roomaanka Hadrian oo ku taal degaankii hore ee Thracia oo loo yaqaan Uskudama), waa magaalo gobolka waqooyi-galbeed ee Turkiga ee Edirne oo ah gobolka East Thrace, oo u dhow xudduudaha Turkiga ee ku yaalla Greece iyo Bulgaria. Edirne wuxuu ahaa magaalo saddexaad oo ka mid ah Boqortooyada Ottoman laga bilaabo 1363 ilaa 1453, ka hor Constantinople (maanta oo Istanbul ah) waxa uu noqday boqortooyada afaraad iyo kan ugu dambeeya. Tirada dadka magaalada ku nool ee 2014 ayaa ahaa 165,979.
Magaaladan waxaa loo aasaasay sida Hadriyaanka (Giriigga ee Giriigga), oo lagu magacaabay Boqortooyada Roomaanka Hadriya. Magaca ayaa wali lagu isticmaalaa luuqada casriga ah ee Giriiga (Αδριανούπολη, Adrianoúpoli). Magaca Turkiga Edirne wuxuu ka soo qaatay magaca Giriiga. Magaca Adrianka ayaa loo isticmaali jiray Ingiriisiga illaa iyo markii la aqbalo turjumaadda latiga ee 1928-kii oo Edirne sameeyey magaca caalamiga ah. Bulgaariya: Odrin, Albanian: Edrenë, Slovene: Odrin iyo Serbian: Једрене / Jedrene waxaa loo qaabeeyey qaababka magaca Hadriyaniyada ama nooca Turkiga ah; sidoo kale fiiri magacyo kale.
Meesha agagaarka Edirne ayaa ahayd goob dagaal oo badan iyo dagaalyahanno, laga bilaabo wakhtiyadii hore ee Giriigta. Muuqaalka xudduudaha u dhexeeya Aasiya iyo Yurub wuxuu keenayaa Edirne taariikhda taariikhiga ah in uu noqdo goobta ugu caansan dunida.
Anshax. Sida laga soo xigtay ereyga Giriigga, Orestes, ina King Agamemnon, waxay magaaladan dhistay Orestias, isku-xidhka Tonsus (Toundja) iyo Ardiscus (Arda) iyo Hebrus (Maritza). Magaaladani waxa ay asal ahaan ka soo horjeedeen degaanka Roman Emperor Hadrian oo ku yaal degaankii hore ee Thracian oo loo yaqaan Uskadama, Uskudama, Uskodama ama Uscudama. Waxay ahayd caasimadda Bessi, ama Odiyanka. Hadriyaanka ayaa soo saaray, wuxuu ku qurxiyey heeso, magaciisana wuxuu u beddelay Hadriyanopolis isaga oo keli ah (taas oo lagu burburin doono Adrianopolis, oo loo yaqaanay Adrianow), oo ka dhigay caasimadda gobolka Roomaanka ee Thrace. Licinius waxaa ku guuleysatay Constantine I oo 323 ah, Emperor Valens waxaa lagu dilay magaalada Gothen 378 intii lagu jiray Battle of Adrianople (378).
Sawirka taariikhiga ah ee Cihannüma Kasrı (Panoramic Pavilion), qayb ka mid ah dhismaha Palace Edirne 813, magaalada waxaa si ku meel gaar ah u qabsaday Khan Krum oo ka tirsan Bolikiya, kuwaas oo dadka deggan u soo guuray dalka Bulgaria oo ku yaal waqooyiga Danube.
Inta lagu jiro jiritaanka Boqortooyada Laatiga ah ee Constantinople, Crusaders ayaa si adag u adkaaday by Emperor Kaloyan ee Bulgaria ee Battle of Adrianople (1205). Sanadkii 1206-kii Adrianka iyo dhulkeeda waxaa la siiyay Bistoole Bistoole ee Theodore Branas oo ah nacaybka lidka ku ah xukuumadda Latin. Later Theodore Komnenos, Despot of Epirus, wuxuu haystay 1227, laakiin saddex sano ka dib waxaa laga adkaaday Klokotnitsa by Asen, Emperor of Bulgarians.
Sanadkii 1369-kii, magaalada waxaa ku guulaystay Suldaanka Ottoman Murad I. Waxa uu u magacaabay "Edirne".
Magaaladu waxay ahaan jirtay caasimadii Ottoman mudo 84 sano ah ilaa 1453, markii Mehmed II uu caasimadda u wareejiyey Constantinople (maanta oo ah Istanbul). Edirne waxa uu ku caan baxday masaajidyadeeda, buuraha, minaaradaha, iyo masraxyada ka soo jeeda wakhtiga Osman.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Edirne&oldid=222725"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Nofeembar 2021, marka ee eheed 07:38.